mgbakọ na mwepụ - Ọzụzụ
Tag Archives maka: "mgbakọ na mwepụ"
Here nọ ebe a: Home » mgbakọ na mwepụ
NumeriCalcio: ihe omume iri na onu ogugu… na football!
Niile na otu: kaadị kwụrụ ụgwọ!
Ike mgbakọ na mwepụ na ọgụgụ isi. Mmekọrịta dị a ?aa?
Tebụl oge: gịnị kpatara ịnọgide na-eburu ha n'isi adịghị mkpa (yana ụfọdụ atụmatụ ọrụ)
Tebụl oge sitere na diski
Ngwá ọrụ ịkwụ ụgwọ maka dyscalculia